को हुन् अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्री ? के–के हुनेछ बदलाव ?
एकल आमाको एक मात्र बच्चाका रूपमा एन्थोनी अल्बानिज सिड्नीको श्रमिक बस्तीमा हुर्किए । जीवनमा अनेक सङ्घर्षबाट उठेर तीन वर्ष वर्षअघि उनी श्रमिकको पार्टी दाबी गर्ने लेबर पार्टीको नेतृत्वमा पुगे । अब अल्बानिजको नामअघि नयाँ फुर्को जोडिदैछ, अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री ।
हिजो सम्पन्न निर्वाचनमा लेबर पार्टीको जितेसँगै ९ वर्षे कन्जरभेटिभ शासन अन्त्य हुने भएको छ । मत गन्ती चलिरहँदा अल्बानीजको पार्टीले १५१ सदस्यीय संसद्मा बहुमत हासिल गर्ने हिसाबमा अघि बढिरहेको छ ।
पछिल्लो मत परिणामप्रति इङ्गित गर्दै ५९ वर्षीय अलबानिजले ‘अस्ट्रेलियाली मतदाताले परिवर्तनको पक्षमा मतदान गरेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । सन् २००७ पछि पहिलो पटक लेबर पार्टीले आम चुनाव जित हासिल गरेको छ । कन्जरभेटिभ पार्टीको लामो शासनमा जमेको समाजमा परिवर्तन ल्याउने उनले दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले जलवायु कदमदेखि आदिवासी अधिकारसम्मलाई आफ्ना प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । उनले राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुने वाचा गरेका छन् । चुनावी जितपछिको पहिला प्रतिक्रियामा अल्बानिजले विगतको कन्जरभेटिभ सरकारको विभाजनकारी राजनीतितर्फ सङ्केत गर्दै आफ्नो शासनमा सम्पूर्ण देशवासीलाई एकताबद्ध गर्न चाहेको बताएका छन् ।
अल्बानिज २६ वर्षअघि पहिलो पटक सांसदमा चुनिएका थिए। त्यस यताको समयमा लेबर पार्टी जम्मा पाँच वर्षमात्र सरकारमा रह्यो। त्यसमाथि केभिन रुड र जुलिया गिलार्डको शासन त्यति स्थिर रहेन ।
अल्बानिज सन् २००७ मा केभिन रुडको सरकारमा पहिलो पटक मन्त्री बने । त्यसपछि उनले आन्तरिक पार्टी राजनीतिमा पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। सन् २०१९ को चुनावमा लेबरको लज्जास्पद हारपछि उनी प्रतिपक्ष पार्टीको नेता चुनिए ।
‘म सानो छदाँ आमा मेरो सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्थिन्। र, मैले तय गरेको जीवन यात्राले अस्ट्रेलियाली नागरिकलाई उचाइ हासिल गर्न प्रेरित गर्नेछ। म यस्तो अस्ट्रेलियाको चाहन्छु, जहाँ तपाई जहाँ बसे पनि, तपाईले जसलाई प्रार्थना गरे पनि वा तपाईको नामपछाडिको थर जे भए पनि त्यही कुराले तपाईको जीवन यात्रामा अवरोध नपुराओस्,’ अल्बानिजले विगतमा भनेका थिए।
सन् १९६० को दशकको सामाजिक रूपमा रुढीग्रस्त अस्ट्रेलियामा उसै पनि कठोर रोमन क्याथोलिक परिवारमा अल्बानिजको जन्म भएको थियो । साथीसंगीमाझ गा¥हो पर्ला भनेर आमा म्यारियनले अल्बानिजलाई उनका पिता कार्लोस अल्बानिज बितिसकेको बताएकी थिइन्। विवाहको केही पछि नै पिता कार्लोस अल्बानिज कार दुर्घटनामा मरेको बताइएको थियो ।
१४ वर्षको उमेरमा मात्र उनको आमाले साँचो कुरा खुलाइन्ः खासमा उनको पिता मरेका होइनन्, बरु दुई जना कहिल्यै विवाह नै भएको थिएन। म्यारीयन उनको अभिभावककै घरमा बसिरहँदा उनको गर्भ बसेको थियो । र सोही गर्भबाट सन् १९६३ मार्च २ मा मेरियनका एक मात्र बच्चाको रूपमा अल्बानिज जन्मिएका थिए। त्यसबेला उनीहरू क्याम्परडाउनको सरकारी भवनमा बस्थे ।
आमाप्रतिको सम्मान र उनको भावनालाई चोट नपुर्‍याउन अल्बानिजले आमा जिउँदो रहुन्जेल पिताको खोजीनिती गरेनन्। तर सन् २००२ मा उनको आमाको मृत्युपछि उनले आफ्ना पिताको खोजी सुरु गरे।
यही खोजीको परिणाम स्वरूप सन् २००९ मा दुई बाबु छोराको भेट भयो । उनका पिता दक्षिण इटालीको बारलेट्टास्थित पुर्ख्यौली नगरमा थिए। अल्बानिज अस्ट्रेलियाको यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रीको रूपमा इटालीको भ्रमणमा रहँदा दुई जनाबीच भेट भएको थियो ।
१२ वर्षको उमेरमै अल्बानिजले आफ्नी आमा बसिरहेको सरकारी भवन क्षेत्र घरजग्गा व्यवसायीलाई बेच्न प्रयासविरुद्ध लडेका थिए। उनले सो क्षेत्र बेचबिखनबाट रोक्नको लागि हडताल संगठित गर्न सघाएका थिए।
अल्बानिजलाई चिन्नेहरू उनमा व्यवहारिकता र सामाजिक न्यायप्रतिको चाहनाको मिश्रण पाउँछन्। यी गुण उनले बाल्यकालीन सङ्घर्षमार्फत विकास गरेका थिए।
‘बढ्दै जाँदा मैले सरकारले आम मानिसको जीवनमा पार्न सक्ने प्रभाव बुझ्दै गएँ । विशेषतः अवसर सिर्जनामा उसको महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप गर्नसक्ने जानेँ,’ अल्बानिजले एक अन्तरवार्तामा भनेका छन् ।
अल्बानिज उनको परिवारबाट विश्वविद्यालय अध्ययन गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्, जहाँ उनले अर्थशास्त्र पढे। विश्वविद्यालयबाट नै उनको राजनीतिक करियर सुरु भएको थियो ।
२ वर्षको उमेरमा उनी लेबर पार्टीको भातृ संगठन योङ लेबरको अध्यक्ष बनिसकेका थिए । विद्यार्थी कालमै उनी लेबर पार्टीका सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका बब हकको सुधारवादी सरकारको अनुसन्धान अधिकृत पनि रहे।
अल्बानिजको नेतृत्वमा लेबर पार्टी
अस्ट्रेलिया अहिले सन् २००१ यताकै सबैभन्दा ठूलो मुद्रास्फीति(महँगी) भोगिरहेको छ। घरको मूल्य आकासिएर छुन नसक्ने भएको छ। लेबर पार्टीको सरकार यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन चाहन्छ ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न अल्बानिजले सन् २०३० सम्म सन् २००५ को भन्दा ४३ प्रतिशत उत्सर्जन कम गर्ने वाचा गरेका छन् ।
त्यतै उनको सरकार नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण बढाउन चाहन्छन् । चुनावी घोषणापत्रमा उनले विद्युतीय कारमा छुट प्रदान गर्ने र समुदायको स्वामित्वमा रहने सौर्य ऊर्जा तथा ब्याट्री परियोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
विदेश नीतिको सन्दर्भमा लेबरले अमेरिकातर्फको झुकावलाई निरन्तरता दिनेछ। अल्बानिज अस्ट्रेलियाको विदेश नीतिको ‘पहिलो खम्बा’ अमेरिकासँगको गठबन्धन हुने बत्ताउँछन्।
उनी ओकसजस्तो दीर्घकालीन गठबन्धनलाई पनि समर्थन गर्छन्। गत वर्ष बेलायत अमेरिका र अस्ट्रेलियाबीच ओकस सम्झौता भएको थियो । त्यस सम्झौता अन्तरगत अमेरिकाले अस्ट्रेलियन जलसेनाका लागि आणविक उर्जासम्पन्न पनडुब्बी बनाइदिदैछ ।
अल्बानिजले मारिसनको सरकारले सोलोमन आईल्याण्डसँगको सम्बन्ध बिगारेको भन्दै आलोचना गदै आएका थिए । प्रशान्त महासागरको टापु मुलुक सोलोमन आईल्याण्डले हालै चीनसँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।
अस्ट्रेलियाको महत्वकाक्षी जलवायु नीतिले प्रशान्ती टापु मुलुकसँगको सम्बन्ध सुध्रने उनको आसा छ। प्रशान्ती टापु मुलुक जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको समुन्द्र सतहको उच्च जोखिममा छन्।
अल्बानिजको नेतृत्वको लेबर पार्टीले छिमेकी साना देशका सेनालाई प्रशिक्षित गराउन प्रशान्तीय प्रतिरक्षा विद्यालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। अस्ट्रेलियाको सम्मुखमै रहेको सोलोमन आईल्याण्डमा आगामी दिन चिनियाँ सैन्य तैनाथ हुने सम्भावनाबीच उसले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो।
उनको शासनकाल मोरिसनको भन्दा के कुराले फरक हुनेछ भन्ने प्रश्नमा अल्बानिजले ‘इमानदारिता र जिम्मेवारी स्विकार्ने क्रम’ बढ्नेछ जवाफ दिएका छन् । ‘म पूर्ण छु भन्ने ढोग गर्दिन, आफ्ना जिम्मेवारी स्वीकार्छु ,’ अल्बानिजले चुनावको मुखमा भनेका थिए ।